China Besuper Fantastic Colorful Baby Diaper Manufacturing and Factory |Baron
Tsy misy chlorine
100% klôro tsy misy hazo pulp miaraka amin'ny FSC voamarina.
Silk rivotra malefaka amin'ny alalan'ny backsheet tsy tenona,
izany dia mifoka rivotra mba hisorohana ny maimaika nappy.
Famolavolana backsheet mahafatifaty & miloko
Famolavolana backsheet mahafatifaty sy miloko miaraka amin'ny
ranomainty tontolo iainana fiarovana.
Embossed Non-tenona Topsheet
Ultra malefaka & maina, ary malefaka amin'ny hoditry ny zaza saro-pady.
Panel sisiny elastika roa miendrika & 3D Leak Guard
Misoroka ny fivoahana amin'ny ilany sy aoriana, manome fahalalahana lehibe indrindra ny zaza.
Ny fomba fanaraha-maso ny kalitao sy ny fitantanana dia nohamarinin'ny antoko fahatelo iraisam-pirenena anisan'izany ny BRC an'i Grande-Bretagne, FDA an'ny Etazonia, CE an'ny EU, ISO9001: 2008, SGS any Soeda, TUV, FSC ary OEKO Z100.
Besuper dia manondrana any amin'ny firenena mihoatra ny 60 eran'izao tontolo izao, toa an'i UK, CZ, Russia, USA, Canada, Panama, New Zealand, Australia, India, Korea, sns.Manolo-tena hanolotra fikarakarana azo antoka sy ekolojika ho an'izao tontolo izao izahay.
Besuper Fantastic Colorful Diaper Performance Test
Besuper (L) H Marika malaza (L)
Full absorption 565 475
Fisorohana ny fihazonana 351 267
Infiltration 45 degre 0 19
Size NB, S, M, L, XL
Habetsan'ny kaomandy kely indrindra (MOD) 10000pcs, afaka mifangaro habe samihafa
Delivery Alefaso eran-tany, 25-30 andro ho an'ny baiko vaovao, 15 andro ho an'ny mpanjifa tsy tapaka
Certification FSC, CE, TCF, BRC, SGS, ISO, OEKO, FDA
Serivisy hafa OEM & ODM, serivisy namboarina
diapers fanary tsara indrindra
diapers zaza fanary
Bamboo Liner, Diaper vao teraka, Famafana zazakely biodegradable organika, Mpanamboatra Diaper, Diaper Baby, Diaper Eco kalitao avo lenta,
Famafana zazakely biodegradable organika, Diaper Eco kalitao avo lenta, Mpanamboatra Diaper, Bamboo Liner, Diaper vao teraka, Diaper Baby,